UMotsepe uhlose ukuhola i-CAF | Scrolla Izindaba
Ukuqokwa kwesikhulu sezimayini se-Mamelodi Sundowns uPatrice Motsepe kwesobumengameli be-Confederation of African Football (CAF), enhlanganweni yebhola laseAfrika.
UAhmad Ahmad obephethe lesi sikhundla bekumele angaphikiswa ukuze kukhethwe kabusha kodwa kube nokuguquka okukhulu okwenzeke ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Ngaphandle kukaMotsepe, umholi webhola lase-Madagascar futhi ongusopolitiki naye uzobhekana nenselelo evela kuJacques Anouma wase-Ivory Coast. Ukhetho lobumengameli be-CAF luzobanjwa ngesikhathi somhlangano wabo we-Elective General Assembly e-Rabat, e-Morocco ohlelelwe inyanga kaNdasa kowezi-2021.
NgoMsombuluko, isigungu esiphezulu se-Safa sigunyaze isinqumo sokuqoka uMotsepe esikhundleni sokuba ngumengameli we-CAF.
Bathe, impumelelo yebhola nezamabhizinisi kaMotsepe iyahlonishwa eAfrika naseMhlabeni jikelele.
I-Safa ithi, sebekhulumile namanye amazwe aseAfrika azokweseka ukuqokwa kukaMotsepe njenge-Nigeria, i-Sierra Leone, i-Botswana kanye ne-Zimbabwe.
Kodwa-ke, izigidi zabalandeli be-Sundowns zizolahlekelwa.
Uma uMotsepe enqoba ukhetho lwe-CAF, kuzofanele ashiye isikhundla sakhe njengomengameli womphetha abavikela isicoco se-PSL.